Discount EPS Foam Mapakeji Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
EPS Foam Mapakeji
EPS - inozivikanwawo seyakawedzeredzwa polystyrene - isingaremi kuputira chigadzirwa chakagadzirwa neyakawedzera polystyrene marozari. Kunyangwe iri yakareruka kurema, inogara yakasimba uye yakasimba zvinechimiro, ichipa kukanganisa kusagadzikana nekukanganisa kushamiswa kwezvakasiyana zvigadzirwa zvakagadzirwa zvekutakura. EPS furo ndiyo imwe nzira yakanakisa yechinyakare chemarata ekuputira zvinhu. EPS kuputira furo inoshandiswa kune akawanda maindasitiri, chikafu chekudya, uye zvekushandisa zvekuvaka, kusanganisira kurongedza chikafu, kusimba kwezvinhu kutumira, komputa uye terevhizheni kurongedza, uye zvigadzirwa kutumirwa zvemarudzi ese.
Changxing's inodzivirira yakawedzerwa polystyrene (EPS) furo ndiyo imwe nzira yakakwana kune yakasarudzika uye zvimwe zvekutakurisa zvinhu. Hunhu hwakasiyana-siyana hweEPS furo inobvumidza yakakura yakawanda yekudzivirira yekupakata inoshandisa. Yakareruka, asi yakasimba zvine mutsindo, EPS inopa inokonzeresa kusagadzikana kutsigira kukuvara kwechigadzirwa panguva yekufambisa, kubata, uye kutumira.
1. Kureruka. Chikamu cheiyo nzvimbo yezvigadzirwa zvePSP zvinotsiviwa negasi, uye yega yega cubic decimeter ine mamirioni 3-6 akazvimirira emhepo-akasimba matema. Naizvozvo, yakati wandei kune gumi makumi eakakura pane epurasitiki.
2. Kugwinhwa neshock. Kana zvigadzirwa zveEPS zvikaiswa pasi pechiremerwa, gasi riri mufuro rinodya nekuparadza simba rekunze kuburikidza nekuderera uye kumanikidza. Iyo furo muviri unodzora zvishoma nezvishoma iyo yekukanganisa mutoro nediki isina kunaka kumhanyisa, saka ine zvirinani yekuvhunduka mhedzisiro.
3. Kupisa kwemafuta. Iyo yekupisa yekudziya ndiyo inoremerwa avhareji yeiyo yakachena EPS yekupisa conductivity (108cal / mh ℃) uye nemhepo inopisa kupisa (ingangoita 90cal / mh ℃).
4. Basa risina mutsindo. Izwi rekuputira zvigadzirwa zveEPS zvinonyanya kutora nzira mbiri, imwe ndeyekutora ruzha simba simba, ichidzikisa kuratidza uye kutapurirana; imwe yacho kubvisa kurira uye kudzikisa ruzha.
5. Corrosion kuramba. Kunze kwekuratidzwa kwenguva refu kumhepo ine simba-zhinji, chigadzirwa hachina chinooneka chekweguru. Inogona kutsungirira akawanda makemikari, akadai sanganisa asidi, sanganisa alkali, methanol, lime, asphalt, nezvimwe.
6. Anti-kunofambira mberi kuita. Nekuti zvigadzirwa zveEPS zvine low low conductivity yemagetsi, ivo vanowanzo tenderera kuzvizvibhadharisa panguva yekukwesana, izvo zvisingazokanganisa zvigadzirwa zvevashandisi vese. Kune epamusoro-chaiwo zvigadzirwa zvemagetsi, kunyanya yakakura-yakakura yakasanganiswa block zvivakwa zvemidziyo yemagetsi emagetsi zvazvino, anti-static EPS zvigadzirwa zvinofanirwa kushandiswa.
Pashure: EPS Furo Ice Cream Bhokisi
Zvadaro: EPS furo reropa chubhu tireyi